နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » NINJAGO Skybound
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: NINJAGO Skybound
ဆိုးယုတ် Djinn Nadakhan မိုဃ်းကောင်းကင်၌ Djinjago သူ၏ဘုံပြန်ဆောက်ဖို့ NINJAGO ကျွန်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုခိုးယူသည်။ ဂျေးအဖြစ်ဖွင့်ခြင်းကိုသင်သူနဲ့ SKY ခိုးယူမြေများပြန်ယူ Zane, ည, လွိုက်, ကိုးလ်နှင့် Kai ကယ်တင်ရန်ပင်လယ်ဓားပြများနှင့် rebu သူ၏ဂိုဏ်းတိုက်ဖျက်ရမယ်
ထိန်းချုပ်ရေး: View instruction in NINJAGO Skybound game to play. Share this Ninjago games for your friend on facebook to get fun. Zane, Nya, Lloyd, Cole
ကစား: 29,431 tag ကို: Ninjago, ninjago ဂိမ်း, Djinn Nadakhan, Djinn Nadakhan games, Zane, Nya, လွိုက်, Cole, webgl, webgl games, Lego ဂိမ်း, Lego, Lego ninjago
Lego ninjago ကြယ်စစ်ပွဲများ Ace ချေမှုန်း 2
Lego Ninjago Star Wars Ace ကို Assault2။
Lego အားကစားပြိုင်ပွဲ Lego ဂိမ်း Play! သင် Lego Star Wars ဂိမ်း Ace ကို Assault2မှာကတော့ galaxy ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးကနေသက်သေပြ! , သင့်ဇာတ်ကောင် Pick သင့်ရဲ့ကြည့်ရှု customize, သင်၏တိုက်လေယာဉ်သင်္ဘောကိုရှေးခယျြ! Go ကိုဇ
Lego မိတ်ဆွေများဘတ်စကက်ဘော mini ကိုဂိမ်းစုပေါင်းပြီး
Andrea ရေကူးကန်တောင်းလေ့ကျင့်နှင့်သင်၏အကူအညီလိုအပျသညျ! လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ဘောလုံးကိုရည်ရွယ်ဖို့ cursor ကိုသုံးပါ။ အစိမ်းရောင်လိုင်းမှန်ကြည့်သောအခါ, ဘောလုံးကိုပစ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
Lego အံ့ဩသံသည်လူ 3
Lego မှ Iron Man3ဇာတ်ကား Iron Man3စာမေးပွဲရဟတ်ယာဉ်ဆန့်ကျင်လေထုတိုက်ပွဲများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Iron Man လက်နက်အပေါ်အခြေခံတဲ့ Lego မှဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်ဂိမ်းထဲမှာတစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်, ပို. ပင်အစွမ်းထက်အသစ်တစ်ခုကိုလက်နက်ထုတ်လွှတ်လိမ့်မယ်။
Lego microfighters ဂိမ်း
LEGO® Star Wars ™ Microfighters Play 'နဲ့ပျော်စရာတွေ့ကြုံခံစား, action ကိုဂိမ်း blasting! အလည်စည်းတိုက်လေယာဉ်, X-တောင်ပံ, စတား Destroyer နှင့်ပိုပြီးတူလေယာဉ်မှူးကအထင်ကရ Microfighters ။
ဆိုးယုတ်သော Ninja ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Toamasina ဒီပလိုမာ Ninja နက်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချ, ငါတို့ဂိမ်းကယ်တင်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ninja ကို spacebar သုံးပြီးခုန်သင့်ပါနှငျ့သငျရိုးကိုအပေါ်ရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
Lego ဂိမ်း: မုန္လာဥနီမိုဃ်းကိုရွာစေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lego သူရဲကောင်းမုန်လာဥနီကိုစုဆောင်းကိုကူညီပါ။ ဒီ Lego မှဂိမ်း Share: မုန်လာဥမိုးကိုသင့် facebook မှ။
Nexo Knights စူပါမဟာတန်ခိုးတော်အားထိတ်လန့်။
အွန်လိုင်း SUPER Mega ပါဝါထိတ်လန့်: အခမဲ့ဂိမ်း NEXO Knight Play
NEXO Knight, SUPER, Mega, ပါဝါ, Lego မှ, Nexo Knights, မှတ်ဉာဏ်ဂိမ်းများ, Lego ဂိမ်း, Nexo Knights ဂိမ်းများ, Nexo, Knights, ရွှံ့စေးဂိမ်းများ, အာရုန်သည် ga ထိတ်လန့်
ဒီနေရာတွင် Lego မှ Nexo Knights မှတ်ဉာဏ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ Lego မှ Nexo Knights မှတ်ဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးခယျြထား Nexo Knights အားကစားပြိုင်ပွဲအားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Lego မှ, Nexo Knights, မှတ်ဉာဏ်ဂိမ်းများ, Lego ဂိမ်း, Nexo Knights ဂိမ်းများ, Nexo, Knights, ရွှံ့စေးဂိမ်းများ, အာရုန်သည်ဂိမ်းများ, Macy ဂိမ်းများ, လှံဂိမ်း
သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူအွန်လိုင်း Lego မှပင်စိန်ခေါ်ဂိမ်း Play နဲ့ပျော်စရာရ။
Lego viking မီးတောက်များ
အခမဲ့ Lego မှဗိုက်ကင်းလှုပျရှားအုံအွန်လိုင်း Play ။ facebook မှဒီ Lego မှဂိမ်းများ Share နဲ့ပျော်စရာရ။
သရဲခြောက်တယ်လို့ကျွန်းမှ scooby-Doo လွတ်မြောက်
Scooby-Doo နှင့် The ဂန်တစ်ဦးက hidden ဘဏ္ဍာကိုမြေပုံနှင့်မဆိုတံခါးကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Lego key ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီတကား ဒယ်ဖနီ, Velma, Shaggy, ဒါမှမဟုတ် Fred သည်အဖြစ် Play နှင့် Scooby-Doo အ Lego key ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပိုငျးပိုငျးကိုကူညီရှာဖွေ, ပျောက် Tre recover
Lego မိတ်ဆွေများလင်းပိုင် hoops
အပျြောလင်းပိုင်ဆိုတာတွေ့ရသူတို့သည် hoops ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကအစာရှောငျနေ! အရိပ်အမြွက်: သင်ပူဖောင်းတွေ့မြင်လျှင်, သူတို့သညျလမျးပေါ်မှာဆိုရင်!
အေးစက်နေတဲ့မင်းသမီး mosaic Lego
သင်တို့သည်ဤလှပသောရုပ်တုဆင်းတုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖန်တီးနိုင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်? image ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအုတ် drag and drop ။ သငျသညျအထဲက print နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများရန်သင့်ဖန်တီးပြသလို့ရပါတယ်! Lego မှ Frozen မောရှေ
အခမဲ့ Ninjago Ninjaday အွန်လိုင်းဂိမ်း Play ။ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဤ Ninjago Ninjaday အားကစားပြိုင်ပွဲမျှဝေပါ။
Lego ninjago အပိုင်
Lego မှ Ninjago ပိုငျဆိုငျ Play နှင့်သင်၏ Facebook ကသူငယ်ချင်းများမှ Ninjago အားကစားပြိုင်ပွဲမျှဝေ!
သင်အကြိုက်ဆုံးစူပါသူရဲကောင်းများဇာတ်ကောင်များအကြားအဆုံးစွန် 3-အပေါ်-3 tag ကိုအသင်းသည်စစ်တိုက်ခြင်းအဆင်သင့်ရ! သငျသညျ, မကောင်းသောအဆင်းယူမှတ်ရဖို့နှင့်အသစ်လက်နက်တွေသော့ဖွင့်ဖို့ကြည့်ရှုကဲ့သို့သင်တို့စူပါရေးအဖွဲ့ Pick! DC ကရုပ်ပြစူပါသူရဲကောင်းများအဖွဲ့ Up ကိုဂိမ်းနှင့်အတူပျော်စရာကိုရယူပါ။
Lego Junior firetruck
မီးသတ် Truck ကားဂိမ်းတစ်ခုLEGO®မီးသတ်သမားအဖြစ်သင့်ကလေးကစားပေးနိုင်ပါတယ်ကစားရန်မလွယ်ကူ။ အာကာသ bar ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကလေးမီးကိုဘူတာရုံသင်တန်းအပေါ်ငယ်လေးမီးလောင်မှုထွက်ထားမည်။ အားလုံး 10 ဦးမီးလောင်သေကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ကလေးတစ်ဦး hap နှင့်အတူအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်
Lego မိတ်ဆွေတွေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပဟေဠိ mini ကို
ကြောင်, လိပ်နှင့် Squirrel များအတွက်အိမ်ဆောက်: သင်သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့အတန်းရှိသည့်တိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်ရန်, အုတ်ဆွဲပါသို့မဟုတ်ဖွင့်လုံး။ "အ?" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ သဲလွန်စဘို့ခလုတ်။
ninjago နင်ဂျာ code ကို
Ninja Code ကို Ninja Code ကိုအတွက် Digiverse Enter! အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ် Overlord အ Ninjago စီးတီး Mainframe အတွက်ယိုယွင်းခဲ့သည်။ ရန်သူယာဉ်များသို့ hack နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အ Ninja ရဲ့ Techno Blade ကိုသုံးပါ။ စစ်တိုက်ခြင်းငှါ Kai, Zane, ကိုးလ်နှင့်ဂျေးအကြားကိုရွေးချယ်ပါ
သူပုန်တွေ 2016 vs Lego ကြယ်စစ်ပွဲများအင်ပါယာ
အဆိုပါ Galactic အင်ပါယာကတော့ galaxy ကျော်သိမ်းယူခဲ့သည်။ အဆိုပါမဟာမိတ်အဖွဲ့အင်ပါယာကိုအနိုင်ယူဖို့အင်အားစုမှဟန်ချက် restore ရပါမည်။ C-3PO ကူညီရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း, ဒါပေမယ့်တစ် Droid အအင်အားစုကိုမသုံးနိုငျသညျ။ သူကနဂါးငွေ့တန်းရဲ့စံပြတည်ဆောက်ရန်သင့်တပ်ဖွဲ့အင်အားကြီးကျွမ်းကျင်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ အပေါ်
Lego မှသူငယ်ချင်းများအနုပညာကိုဖန်ဆင်းသောဂိမ်း။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အနုပညာဒီဇိုင်းရေးဆွဲ! , Paint ပုံကြမ်းနှင့် Heartlake စီးတီးမှအပေါငျးတို့သမိတ်ဆွေများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုဆွဲပါ။ ဒီဇိုင်နာစတစ်ကာများ, နောက်ခံနဲ့ပြီးပြည့်စုံ finish ကိုများအတွက်ဘောင်၏စာရေးနှင့်အတူအလှဆင်!
Lego မှသူငယ်ချင်းများဖျော်ရည်ရောနှောသတ်မှတ်မည်။ အဘယျသို့အရသာသင်တက်ရိုက်မှာလဲ? သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဤပျော်စရာဂိမ်း Share နဲ့ပျော်စရာရ။ အွန်လိုင်းအခမဲ့ Lego မှဂိမ်း Play ။
ဒဏ္ဍာရီ Ninja ကိုတိုက်ပွဲ - ninjago ဂိမ်း
ဒဏ္ဍာရီ Ninja စစျပှဲတှငျအ Ninja ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးရန်သူများကိုစစ်တိုက်ခြင်း, Kai, ကိုးလ်, ဂျေး, Zane နှင့်လွိုက်အားလုံးအစွမ်းထက် Ninja သော်လည်း, တစ်ဦးတည်းသာ Ninjago အတွက်အကောင်းဆုံး Ninja သရဖူရရှိစေနိုင်သည်။ အ ti ဆိုလတံ့သောအထဲကရှာတွေ့မှမော်ကွန်းသူဌေးကတိုက်ပွဲ၏ဆက်တိုက်မှတဆင့် Play
အ Ninjago ဂိမ်းအဆိုပါလေးဦး Paths အတွက်ကို elemental အင်အားကြီးနှင့် Spinjitzu ကျွမ်းကျင်! Dodge သင့်ရဲ့နင်ဂျာကျွမ်းကျင်မှုထက်မြက်ဖို့ရေခဲတောင်များ sparks နှင့်စကေး! Spinjitzu ၏မာစတာ: Ninjago ကနေလေးနင်ဂျာအဖြစ် Play!
Lego အံ့ဩရဲ့ Avengers Captain America
ကမ္ဘာမြေကိုကျူးကျော်လျက်ရှိသည်နှင့်စူပါသူရဲကောင်းဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်ဒီ Lego မှစွန့်စားမှုအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလူကြမ်း Loki ကဖျက်ဆီးခံအနေဖြင့်ကမ္ဘာမြေတားဆီးရပါမည်။ သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်အားလုံးမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေဖျက်သိမ်းရေးလမ်းပေါ်မှာဖျက်ဆီးခြင်းကိုဖြတ်ပြီးခုတ်မောင်း
အ nindroids ၏ ninjago မြင့်တက်
သူပြီးသားလည်းအဟောင်းနှင့်အားနည်းသောကွောငျ့ဟုတ်သားပဲဝူဆိုးသောတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ယခုသူ၏တပည့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောကနေသူ့ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ အဟုတ်သားပဲ၏ hologram အချို့သောအကြံပေးချက်များနှင့်အတူသူတို့၏လမ်းပေါ်တွင် Ninja ကူညီပေးနေသည် - ဂရုတစိုကျသူတို့ကိုဖတ်ပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Kai သူ့ကိုလမ်းအပေါင်းတို့၌နဂါးကိုသတ်နှင့်ပိုပြီးအာဏာကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြွေစေ့စုဆောင်းကူညီ, သူ့ဂုရုကယ်တင်ဖို့ရန်ရှိသည်။
တစ်ဒဏ္ဍာရီ ninjago တိုက်ပွဲများ
ကျနော်တို့ဆိုအတားအဆီးမကြောက်သူသည်အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ရှာကြ၏။ ဟေ့! သင်အဲဒီမှာရှိပါလား? သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး Ninja ကိုရှေးခယျြပါနှင့်အင်အားအကောင်းဆုံးနဂါးကိုစစ်တိုက်! ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအအနိုင်ရရှိရန်သင့်လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှရန်သူများကိုသတ်။ အကြှနျုပျတို့သညျပွုပါမညျဟုငါသိ၏။ ကားကိုယူ
Lego ninjago - နဂါးတောင်ကြီးတောင်ငယ်
ဒီအလယ်ခေတ် Lego မှဂိမ်း Play ။ ထိုလောက်လွှဲ မှနေ. Get, နှင့်ရဲတိုက်ဆန့်ကျင်ပစ်, အဖူးအငုံထွက်ယောက်ျားတွေနဲ့စုဆောင်းရွှေရည်မှန်း။
အဆိုပါညဇီးကွက်သည်သူ၏အနာဂတ်ပြတိုက်များအတွက်မာဂရက်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။ မရဏ Kwon သလား: အခုမော်ဒကဲနှင့် Rigby သူ့ကိုသူတို့ဘယ်လိုသိတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကိုရပ်တန့်ကြရပါလိမ့်မယ် မကောင်းသောအညဇီးကွက်အနိုင်ယူနှင့်မာဂရက်ကယ်တင်!
တပါးကိုရှာဖွေနှင့်ဤဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်သွားထရံကိုကျော် Spider-Man ခုန်ကူညီပါ။
X-Men tokyo သူ၏ဒေါသအမျက် wolverine
အဆိုပါဒဏ္ဍာရီ Wolverine ပြန်သင့်ရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုကျိုမှဒုစရိုက်ကို Ninja ကိုအဆွေအမျိုးလောကဓာတ်လုံးကိုဖမ်းမယ်။ သာဗိုလ်ကြီး Logan ဟာသူတို့ရဲ့လိမ္မာအစီအစဉ်ကိုစစ်မှန်တဲ့လာအောင်မှသူတို့ကိုတားဆီးနိုငျပါသညျ!
gumball ဝေးလံခေါင်သီ fu ၏အံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာကြီး
တီဗီဝေးလံခေါင်သီ၏အပိုင်အဆိုပါ Wattersons '' စစ်တိုက်ညစ်ပတ်ရရှိသွားတဲ့။ ဝေးလံခေါင်ဖျားဘို့ Fight နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးပြပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့, လက်ျာဝင်ငွေ!
Gumball အဝေးမှဖူဂိမ်း၏ Amazing ကမ္ဘာ့ဖလား Play
ကျနော်တို့ရှင်းလင်းသောဝံဂိမ်း - ဝင်ရိုးစွန်းအင်အားသုံး
မိမိအသန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်နှင့်အတူညအချိန်တွင်တစ်ဦး atroll အဘို့အသွားပြီးနောက်ရေခဲပြင်ထမ်းရွက်သည်မိမိစက်ရုပ်မိတျဆှေကိုခိုးယူသောသူအချို့ဒုက္ခအင်ဂျင်နီယာများအပေါ်သို့ထိ မိ. လဲ။ အခုတော့သူကအိမ်မှာဘေးကင်းစွာရရှိရန်နှင့်အသံနိုင်ရန်အတွက်စက်ရုပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့ရှိပါတယ်!
ပုံမှန်ပြပွဲဂိမ်း - နတ်ဆိုး naptime
သူကသူတို့ကိုသောမတ်စ်, မရဏရဲ့သား babysitting အဘို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်သဘောတူဒါ Muscleman မော်ဒကဲနှင့် Rigby တစ်မျက်နှာသာကြွေးတင်နေသည်။ အဘယ်အရာကိုသူနောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက်သူသောမတ်စ်အလုံအလောက်အိပ်စက်ခြင်းမရပါဘူးဆိုရင်, သင်္ချိုင်းသို့အကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ Chase feathered ရှင်းလင်းသောဝံ
အဆိုပါဝံလုယက်ခဲ့လေပြီတကား Grizz, Panda နှင့်ရေခဲပြင်ထမ်းရွက်ပြန်ရပ်ကွက်အတွင်းအကြမ်းဖက်ခဲ့ရဲ့ pidgeons ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောဂိုဏ်းမှမိမိတို့ကျောပိုးအိတ် get ကိုကူညီပါ။
အာဏာကို Rangers အာဏာကိုတိုက်ဖျက်မည်
ပျဉ်နှင့် Vivix သူ၏စစ်တပ်သည် Energems ၏တန်ခိုးရဖို့ဘာမျှမမှာရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ပါဝါ Rangers သူတို့ကိုအနိုင်ယူကူညီဖို့ရန်သင့်အားတက်ပါတယ်။ သငျသညျကို Power Rangers ကို The Power တိုက်ဖျက်မည်နဲ့တူခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးကထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဆင်ပြေ,fနိုင်ပါတယ်
အ puppybots ၏ powerpuff မိန်းကလေးတိုက်ခိုက်
ထိုခွေးပေါက်စလှတျမွောကျဖို့စက်ရုပ်ခွေးနှင့် Mojo Jojo ရဲ့မကောင်းသောအ henchmen ကိုဖွိုဖကျြ!
ကူညီပါ! နဂါးယူခဲ့ပြီးဒီပျော်စရာအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်း၌သူ၏ကယ်ဆယ်ဖို့လာရန် Kid အန္တရာယ်နှင့်ဗိုလ်ကြီးက Man မှတက်ပဲ! ဟင်နရီအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးမြည်တဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းခုနှစ်တွင်ဟင်နရီအန္တရာယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဂျက်အနည်းငယ်ဏအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲဖြစ်ပါတယ်
Power က Rangers: စူပါဆာမူရိုင်း
Xandred ဆဲကမ္ဘာမြေ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်, ပါဝါ Rangers ဆိုးသောဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ရမယ်! ဒီဂိမ်းကိုကစားရမယ်!
Power က Rangers Dino Thunder
Power က Rangers မကောင်းသောနေ့ကိုကယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ပါဝါကို Rangers ကနေရွေးချယ်ပါ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသလား?
စွမ်းအင်ကိုလှံနှငျ့သငျ့ရဲ့ Ninja ကိုတပ်ဆင်နှင့်သူ၏စွန့်စားခရီးစဉ်ကိုစတင်! အားလုံးသူ့အပြိုင်ဘက်ကိုဆင်းရိုက်ရန်သင့်နင်ဂျာဆင့်နှင့်စက်ရုပ်၏ကမ်ဘာ့အောင်နိုင်!
ဘင် 10 Ultimate ဂြိုလ်သား
ကဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဂိမ်းချွေ၏ဘင် 10 Ultimate ဂြိုလ်သားမစ်ရှင်တွေ့ဆုံရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ရန်သူတိုက်ခိုက်ရေးသမားသင့်ရဲ့ရှာပုံတော်ရဲ့ start ပြီးနောက်ရိုက်ခတ်သောအခါ, အသငျသညျ action ကို duyar လုပ်ရပါမည်ပုံပေါ်? ဌ? ထိရောက်မှုလက်ဖြောင့်စက်ရုပ်။ ဂိမ်းစတင်ဂိမ်းပြီးနောက်, ကလစ်
ရည်ရွယ်ချက်တွင် Iron Man Assault
တစ်ဦးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စက်ရုံ၏ Iron Man ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း AIM ၏တပ်ဖွဲ့များမှအဓိကခြိမ်းခြောက်မှုတက်လှည့်
တစ်ဦးကတီထွင်ဖန်တီး Doraemon စွန့်စားမှုဂိမ်း။ Doraemon အပေါငျးတို့သ Dora-yaki ကိုစားနိုင်ရန်အတွက်ဘဏ္ဍာကိုအမှုကနေ tools တွေကိုအသုံးပြုမှုစေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီ Dora-yaki စွန့်စားမှုအတွက်သူ့ကိုကူညီကြပါစို့
ဒိုရာနဲ့ပျောက်ဆုံးချစ်သူများနှင့်အတူ Adventures ကို။ http://ofunnygames.com အပေါ်ဒီဂိမ်း Play
Ninjago နဂါးတိုက်ပွဲ Lego မှ
ဤအရာသည်အလွန် 3D ပစ်ခတ်မှုမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ်မိကျောင်းနှင့်အတူထိတ်လန် 3D အမြင်အာရုံထိခိုက်မှု Ninja နှင့်အတူအပြင်းအထန်ကြသည်။ Ninja အမိကျောင်းနှင့်အတူပြင်းစွာသောအစစ်တိုက်ပွဲစတင်ပြီးမိမိအပျံ Ninjago စက်ရုပ်ကိုမောင်းနှင်နေသည်။ က vict ယုံကြည်ဆုံးကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်း,
ဘင် 10 ဆာမူရိုင်း Warrior
ဘင် 10 ဆာမူရိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာဖမ်းမိထားပြီး! သူ့ကိုရှင်သန်ကိုကူညီပါနှင့်ဤအသစ်စွန့်စားမှုထွက်ရ!